Frantsa dia manolotra drafitra hampiakarana herinaratra avo roa heny amin'ny 2023 | Fanavaozana maintso
Portillo Alemanina | | Herin'ny rivotra, Angovo azo havaozina
Te hahafantatra ny fomba fikasan'izy ireo hanatanterahana izany ve ianao?
1 Ampitomboy ny herin'ny rivotra
2 Olana ara-pitantanana sy birao
Ampitomboy ny herin'ny rivotra
Ny tanjon'ny drafitra natolotr'i Frantsa dia ny hamokarana angovo hatramin'ny 26.000 MW amin'ny 2023. Ankehitriny dia misy 13.700 XNUMX MW. Miaraka amin'ny fanavaozana izay antenaina hampiharina ao anatin'ilay drafitra, dia azon'izy ireo atao ny manapaka hatramin'ny antsasaky ny fotoana ilaina mba hahavitana ireo tetik'asa angovo rivotra ary ampifandraisina amin'ny tariby mandeha amin'ny herinaratra.
Ny salan'isa eo anelanelan'ny fotoana ananganana tetikasa angovo rivotra mandra-pahatongan'ny fotoana fiasany dia matetika eo anelanelan'ny fito sy sivy taona. Raha ampitahaina amin'i Alemana, telo na efatra taona fotsiny ny tetikasa.
Olana ara-pitantanana sy birao
Ny fotoana lany eo anelanelan'ny famoronana ny tetikasa sy ny asany dia misy fepetra rehefa mametraka ny lafiny lehibe indrindra. Ireo vondrona dia nanolotra fitarainana manohitra ny tetikasan'ny rivotra any amin'ny fitsarana noho ny olana amin'ny tabataba sy ny fiantraikan'ny tontolo iainana. Raha vantany vao mametraka ny fampakarana ireo vondrona Mila taona maro ny famakafakana tranga ary mihemotra ireo tetikasa.
Noho izany, ny ezahina ho tratrarina amin'ity drafitra ity dia ny fampihenana ity fotoana famakafakana ity, mba hahafahana mamaha mivantana ny antso apetraka mandritra ny fitsarana ambony.
Anisan'ny tolo-kevitra naroso hafa ny fanovana ny fizarana tombotsoan'ny hetra, amin'ny fampitomboana izany amin'ireo faritra mampiantrano ny rivotra. Ity fepetra ity dia nitehaka manokana ny federasionan'ny vondrom-piarahamonina izay mitantana ny serivisy ho an'ny daholobe an'ny angovo sy rano (FNNCR).
Manomboka izao, ireo faritra ametrahana angovo angovo betsaka kokoa dia hahazo tombony ara-toekarena indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Frantsa dia manolotra drafitra hampiakarana herinaratra avo roa heny amin'ny 2023
Tokony hafaingana ny tetezamita angovo mba hialana amin'ny fiovan'ny toetrandro